ဘယ်သူ့မှ မပြောရဘူးနော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘယ်သူ့မှ မပြောရဘူးနော်
Posted by moonpoem on Jun 11, 2014 in Creative Writing | 15 comments
ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပေါ့ဗျာ။ရန်ကုန်မှာ ကားကြပ်ခြင်းတွေကို အမြန်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းက မရှိဘူး မဟုတ်ဘူးနော် ရှိတယ် ခင်ဗျ။ကျွန်တော် မပြောတာ ကျွန်တော့်အကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော်ရှိတယ်။ ဘယ်သူမှတော့ မသိစေနဲ့ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ပြောပြမယ် နားထောင်နော်။ ပြီးရင် ဘယ်သူ့ မှ ပြန်မပြောရဘူးနော်။
ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဗျ။ ရန်ကုန်မြို့ တော်တွင်း ဆိုင်ကယ်မ၀င်ရ ဆိုင်ကယ်မစီးရဆိုပြီး သတ်မှတ်မယ့်အစားရန်ကုန်မြို့ တော်တွင်း ကားမ၀င်ရ ကားမစီးရဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်ရင် ကားကြပ်ခြင်းတွေဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲ ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေတယ်ဗျ။
ပြည်သူတွေက ဆိုင်ကယ်စီးရင်စီး၊ မစီးချင် စက်ဘီးစီးပြီး အလုပ်သွားလေဗျာ။အားလုံးအေးဆေးပဲ။မိသားစုလိုက်သွားချင်လာချင်ရင် ဆိုက်ကားစီးသွား။တောကဆွေမျိုးတွေ လာရင် မြင်းလှည်းစီး နွားလှည်းစီး။
နိုင်ငံခြားသားတွေကိုလည်း လေယာဉ်ကွင်းကနေ မြင်းလေးတစ်ကောင်ဆွဲပြီး သွားကြို။အုပ်စုများရင် မြင်း၎ကောင်ဆွဲတဲ့ မြင်းရထားကြီးနဲ့ ကြို။ဒါဆို ကားပါမစ်တွေ ဈေးကျပြီး နယ်တွေဘက်မှာပဲ အစီးများမှာ။နယ်က မြင်းအကောင်တစ်ရာနဲ့ ရန်ကုန်ကားတစ်စီးလဲတဲ့ ဈေးကွက် ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကားဆားဗစ်စင်တာတွေနေရာမှာ မြင်းဆားဗစ်စင်တာ ဖြစ်လာမယ်။ကားဝပ်ရှော့တွေ နေရာမှာ မြင်းဝပ်ရှော့ တွေ နွားဝပ်ရှော့ တွေ ဖြစ်လာမယ်။ ကားအပိုပစ္စည်းတွေအစား မြင်းကုန်းနှီးတို့ ဇက်ကြိုးတို့ အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်တွေများလာမယ်။ကားအလှပြင် ပစ္စည်းဆိုင်တွေအစား မြင်းအလှဆင် တို့ နွားချိုအလှဆင်တာတဲ့ ဈေးကွက်
ကျယ်ပြန့် လာမယ်။ အိုးး….ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လဲဗျာ။မော်တော်ပီကယ်တောင် သိပ်လိုတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
အဲ အဲဒီအကြံ ရွာထဲမှာ ပျံ့ လို့ မဖြစ်ဘူး ပြီးတော့ လူကြီးတွေ သိလို့ မဖြစ်သေးဘူး။
ကျွန်တော်က အသည်းငယ်တယ် ကြောက်တတ်တယ်ဗျ။အခန့် မသင့်လို့ ကျွန်တော့်ကို အကြံပေးခန့် လိုက်ရင် ဒုက္ခရောက်နေမှာစိုးလို့ အဲဒါခင်ဗျား သွားမပြောနဲ့ နော်။
မြင်း taxi အုပ်စုဖွဲဆွဲဖို့ ဘာတွေလိုလည်း စနည်းနာလူစုအုံးမှဘဲ
Mirror Follow Air Ginger.
သူကြီးပြောပြောနေတဲ့ သန်းချီလုပ်ငန်းကြီး လဲ ဖြစ်ရော။
တကယ်သာဖြစ်။ ဟိုတယ်တွေတောင်မလို နွားလှည်း၊ မြင်းလှည်း နောက်ဆွဲ တွေ ကို ဟိုတယ်လုပ်။
လကဗျာ – ဒီအကြံကို မြန်မြန်လေး ကော်ပီရိုက်လိုက်ဟေ့။
အရီးလဲ တစ်စ ပါမယ်နော်။ :-))
၁၆ ရာစု (ဥပမာ) မှာ မြင်းလှည်းကိုပဲ သွားလာရေးအတွက် အသုံးပြုနေရလို့…..
၁၇ ရာစု (ဥပမာ) ရောက်ရင် လမ်းတွေပေါ်မှာ မြင်းလှည်းတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်ပြီး မြင်းချေးတွေကလည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင် ဒုက္ခပေးလာလိမ့်မယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်တယ်တဲ့။
တကယ့်တကယ်ကျတော့ ၁၇ ရာစု ရောက်တဲ့အခါ စက်တပ်ယာဉ်တွေက အစားထိုး ၀င်ရောက်လာပြီး မြင်းလှည်းတွေတောင် ပျောက်သွားတယ်။
တခါတလေမှာ ကြိုတင်တွက်ဆ ဟောကိန်းထုတ်ထားတာတွေထက် ပိုပြီးအဆင်ပြေ ကောင်းမွန်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
ခုလည်း ကားတွေကြပ်လို့ ညည်းချက်ထုတ်နေကြရပေမယ့်…..
နောင်မကြာခင်ကာလမှာ ကားတွေအစား ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ ပိုပြီး အဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်ကြမလား မသိနိုင်ဘူး။
ဟန်းနီးမွန်းခရီးတောင် လကမ္ဘာ ဆိုတော့လေ ………..
စာကြွင်း- ရွာထဲမှာရေးတာ ဥပမာ ကို အတော်သိတိထားပြီး ရေးရတယ်။ တစ်ချက်မှားသွားရင် မလွယ်ဘူးဆိုတော့။
ဘူ့ကိုမှကြောဝူးးးးးးးးးးးဖွဘုတ်ထဲမှာ ရှဲလိုက်တော့မယ် Idea လန်းလွန်းလို့
လူကြီးတွေ သိလို့ မဖြစ်ဘူး
အင်း… ကိုယ်တွေက လူကြီးမဟုတ်သေးတော့ သိလို့ဖြစ်ပါသေးတယ်နော့
ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံသစ်ဆီသို နှစ်ကြာအောင် ( ခရက်တစ် ကိုခင်ခ)
မွန်ပိုအမ် ရဲ့ ဘယ်သူ့မှ မပြောရဘူးနော် ထဲ့က မြင်းလှည်နွားလှည်းစီးရင် အေးအေးလူလူသွာကြရအောင်နော်
အနော် မြင်းပါမစ်ချပေးမယ် ဟိဟိ
အလုပ်ကို မြင်းကြီးစီးပြီး တကယ်လာချင်တာ
အလုပ်ပြန်လည်း မြင်းကြီး တစ်ကလုပ်တစ်ကလုပ်စီးပြီးပြန်
မြင်းညိုရှင်တို့ မြင်းဖြူရှင်တို့ထဲက ကြိုက်တာရွေးလို့ ရသေးတယ်။
နယ်တွေကနေ မြင်းလှည်း၊နွားလှည်း အပိုပစ္စည်းတွေ ၀ယ်စုထားအုံမှပဲ…ဒါမှမဟုတ် မြင်း၊နွား ချေးကျုံး ၀န်ဆောင်မှု ထောင်မယ်… ဟေ့ဟေ့ဟေ့….
မြက်ခြောက်၊နွားစာ စင်းစက်တွေ ထုတ်မယ် ရောင်းမယ်… ဟေ့ဟေ့ ဘောစိဖြစ်မယ့်ကိန်း….
မွန်းပိုအမ်ပြောတာ ကြားသွားပြီထင်တယ်။ :p:
မြက်ရောင်းစား မယ် ဒါ ဘဲ
ဒီအကျန် မဆိုးဘူးးးးး
မြန်မ်ြန အ ကောင် အထည် ဖော် ရမယ်
ဘယ်သူ့ ကိုမှမ ပြောနဲ့ ဆိုတော့
ဟို ဘုန်းကြီး ကို အရင် ပြောပြရမယ် နောက်မှ ဘဘုန်းက
တဆင့် လူကြီးတွေ နားထဲ တိုးတိုးလေး ရောက် မှာ ဆိုတော့
လကဗျာ ပူ နဲ့ တော့ ဘဘုန်းရှိဒယ် တဲ့ 